လမ်းပြကြယ်: အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အခွင့်အလန်းဆွေးနွေးပွဲ(ဂျပန်)
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အခွင့်အလန်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုမိုးသီးဆွေးနွေးမယ်။ မပျက်မကွက် တက်ရောက်ကြ။
'' မြန်မာ ပြည်ဟာ လမ်းဆုံလမ်းခွတခုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
လမ်း တခုက သုခမြို့ သို့ခေမာလမ်း ဖြစ်တယ် ။ တခုက ဒုကခ မြတို့သို့အသူရာလမ်းဖြစ်တယ်။
ဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲ။ ခေမာလမ်းမှာ အခွင့်အလန်းတွေ (Opportunity )တွေရှိတယ်။ အသုရာလမ်းမတော့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးခြင်း (Miseries ) တွေရှိနေတယ်။
ကျနော်တို့ ဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲ ။'' မိုးသီးဇွန်
ဘယ်အချိန် လဲ ။ ။ နေ့ လည် ၁နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ ညနေ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ်ထိ
ဘယ်နေ့ လဲ ။ ။ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့ ) ၂၀၁၂
ဘယ်နေရာမှာလဲ ။ ။Ikebukuro( ဘူတာအရှေ့ ဖက်ထွက်ပေါက်မှလမ်းလျှောက် ၅ မိနစ်)
Life and Industry Plaza B 1(Kumin Center အနောက်ဖက်အဆောက်အဦ)
Higashi Ikebukuro,Toshima-ku 1-20-15,Tokyo
Phone. 03-5992 7011
ကိုကိုအောင် Phone. 090 1506 2893 , kokoaung27@gmail.com
ကိုကျော်ကျော်နိုင် Phone. 080 1236 3356 , kkn350@hotmail.com